ဆှေးနှေးခကျြ:သနျ့၊ ဦး - ဝီကီပီးဒီးယား
၁ Unicode 4.1 သုံးနတေဲ့စာမကျြနှာ
၄ ကုလသမဂ်ဂ အထ်ေဝထ်ေဝအတ်ဝင်းရေးမ်ဟူးခ်ယုပ်‌
၅ ထူးခ်ရား ပ်ေရာင်‌မ်ေရာက်‌သည့်‌ နောက်‌ဆုံးပ်ဲဝ
Unicode 4.1 သုံးနတေဲ့စာမကျြနှာ[ပွငျဆငျရနျ]
မဟာသရစေညျသူ ဦးနု (၁၉ဝ၉ ခုန်ဟစ်‌ ဇန်‌နဝာရီ ၂၂ - ၁၉၇၄ ခုန်ဟစ်‌ နိုဝင်‌ဘာ ၂၅) သည်‌ မ်ရန်‌မာနိုင်‌ငံသား သံတမန်‌တစ်‌ဦး ဖ်ရစ်ရပီး တတိယမ်ေရာက်‌ ကုလသမဂ်ဂအထ်ေဝထ်ေဝအတ်ဝင်းရေးမ်ဟူးခ်ယုပ်‌အဖ်ရစ်‌ ၁၉၆၁ မ်ဟ ၁၉၇၁ ခုန်ဟစ်‌ထိ တာဝန်‌ထမ်း ဆောင်‌ခဲ့သည်‌။ သူ၏ရ်ေဟ. ဤရာထူးတ်ဝင်‌တာဝန်‌ယူသ်ဝား သော ဒက်‌ဟာမားရ်ဟိုးလ်‌ ၁၉၆၁ ခုန်ဟစ်‌ စက်‌တင်‌ဘာတ်ဝင်‌ လယောဉ်‌ပ်ယက်‌က်ယသဆေုံ်းရပီး နောက်‌ ၄င်းတာဝန်‌ကို ထမ်း ဆောင်‌ရန်‌ သူ.အား ရ်ဝေးခ်ယယ်‌ခဲ့က်ရသည်‌။ ဦးသန့်‌သည်‌ မ်ရန်‌မာလိုအာ်းရဖင့်‌ လူက်ရီးလူကောင်းတို့၏အမည်‌နာမရ်ေဟ.တ်ဝင်‌ရိုသမ်ေဟုပ်ရုသောစကားလုံ်းရဖစ်ရပီး ဦးသန့် မ်ဟာသူ၏အမည်‌ ဖ်ရစ်‌သည်‌။ မ်ရန်‌မာပ်ရည်‌တ်ဝင်‌ သူ.အား သူ၏ ဇာတိကို ည်ဝ်ဟန်းရပီး ပန်းတနော်‌ဦးသန့်‌ဟု ခော်‌ဝော်‌က်ရသည်‌။ မဟာသရစေည်‌သူမ်ဟာ ဘ်ဲဝ.နာမည်‌ဖ်ရစ်ရပီး မ်ရန်‌မာအစိုးရမ်ဟ ခ်ယီ်းရမှင့်‌သောသူကောင်း ပ်ရုသည့်‌ ဘ်ဲဝ.တစ်‌ခ်ုရဖစ်‌သည်‌။
ဦးသန့်‌သည်‌ အောက်‌မ်ရန်‌မာနိုင်‌ငံ ပန်းတနော်‌ဇာတိဖ်ရစ်ရပီး ပန်းတနော်‌မ်ရို့အထက်‌တန်း က်ေယာင်းန်ဟင့်‌ ရန်‌ကုန်‌တက်ကသိုလ်‌တို့တ်ဝင်‌ သမိုင်းပညာကို သင်‌က်ရားခဲ့သည်‌။ သား လေးယောက်‌အနက်‌ အက်ရီးဆုံ်းရဖစ်ရပီး မိဘမ်ယားမ်ဟာ ခ်ယမ်းသာသော လယ်‌ပိုင်‌ရ်ဟင်‌န်ဟင့်‌ ဆန်‌ကုန်‌သည်‌မ်ယာ်းရဖစ်‌က်ရသည်‌။ သူ၏ ဖခင်‌ ဦးဖိုးန်ဟစ်‌မ်ဟာ ရန်‌ကုန်‌၌ သူရိယသတင်းစာကို ထူထောင်‌ရာတ်ဝင်‌ ပာဝင်‌ခဲ့်ရပီး ဗမာ့သုတသေနအသင်း က်ရီးအား ကမကထပ်ရု ထူထောင်‌ခဲ့သူတစ်‌ဦးလည်း ဖ်ရစ်‌သည်‌။ သူ၏ဖခင်‌မ်ဟာ ဦးသန့်‌ ၁၄ န်ဟစ်‌သားတ်ဝင်‌ က်ဝယ်‌လ်ဝန်‌ခဲ့်ရပီး အမ်ေဝဆိုင်‌ပ်ရသနာမ်ယားကို ရင်‌ဆိုင်‌ရင်း မိခင်‌န်ဟင့်‌အတူ သား လေးဦးတို့မ်ဟာ င်ေဝရေးက်ေရးရေး အခက်‌အခဲမ်ယားစ်ဝာ က်ရုံခဲ့ရသည်‌။ တက်ကသိုလ်‌မ်ဟ ပ်ရန်‌လ်ာရပီးနောက်‌ ၂၅ န်ဟစ်‌အရ်ဝယ်‌ ဦးသန့်‌သည်‌ ပန်းတနော်‌ အမ်ယိုးသား က်ေယာင်း၏ က်ေယာင်းအုပ်‌အဖ်ရစ်‌ လုပ်‌ကိုင်‌ခဲ့သည်‌။ ဤကာလအတ်ဝင်း သူသည်‌ ၄င်းအရပ်‌ဒသေတ်ဝင်းက မအူပင်‌မ်ရို့တ်ဝင်‌ က်ေယာင်းစစ်‌ဆေးေ ရးလုပ်‌နသေူ (နောင်‌တ်ဝင်‌ ဝန်‌က်ရီးခ်ယုပ်‌ဖ်ရစ်‌လာမည့်‌) ဦးနုန်ဟင့်‌ ခင်‌မင်‌ရင်းန်ဟီးခဲ့လသေည်‌။ ဦးသန့်‌သည်‌ ကလောင်‌အမည်‌ သီလဝဖ်ရင့်‌ သတင်းစာ၊ မဂ်ဂဇင်းမ်ယားတ်ဝင်‌ ဆောင်းပားမ်ယား ပုံမ်ဟန်‌ရေး လေ့ရ်ဟ်ိရပီး နိုင်‌ငံတကာအသင်းအဖ်ဲဝ. က်ရီး အက်ေရာင်း အပာအဝင်‌ အခ်ရားစာအုပ်‌မ်ယားစ်ဝာကို ဘာသာပ်ရန်‌ဆိုခဲ့လသေည်‌။းကါမစဆအဒဆငသအ အ၄ဟ ဒပ၉ဆ၄
လ်ဝတ်‌လပ်‌ရေးရစ ၁၉၄၈ ခုန်ဟစ်‌တ်ဝင်‌ ဦးနုဝန်‌က်ရီးခ်ယုပ်‌ဖ်ရစ်‌လာသောအခာ ဦးသန့်‌အား ရန်‌ကုန်‌တ်ဝင်‌ အသံလ်ဝ်ဟင့်‌ဌာန၏ ပ်ရန်‌က်ရားရေးမ်ဟူးအဖ်ရစ်‌ လုပ်‌ကိုင်‌ရန်‌ ဖိတ်‌ခော်‌ခဲ့သည်‌။ နောက်‌တစ်‌န်ဟစ်‌တ်ဝင်‌ ဦးသန့်‌အား မ်ရန်‌မာနိုင်‌ငံအစိုးရ၏ ပ်ရန်‌က်ရားရေးဝန်‌က်ရီးဌာနတ်ဝင်‌ အတ်ဝင်းဝန်‌အဖ်ရစ်‌ ခန့်‌အပ်‌ခဲ့သည်‌။ ၁၉၅၁ မ်ဟ ၁၉၅၇ ခုန်ဟစ်‌အတ်ဝင်း ဦးသန့်‌သည်‌ ဝန်‌က်ရီးခ်ယုပ်‌၏ အတ်ဝင်းရေးမ်ဟူးအဖ်ရစ်‌ မိန့်‌ခ်ဝန်းမ်ယား ရေးပေ်းရခင်း၊ နိုင်‌ငံခ်ရားခရီးစဉ်‌မ်ယားအား ရေးဆ်ဲဝပေ်းရခင်းန်ဟင့်‌ နိုင်‌ငံခ်ရားဧည့်‌သည်‌ မ်ယားန်ဟင့်‌ တ်ေဝ.ဆုံပေ်းရခင်းမ်ယားတ်ဝင်‌ ပာဝင်‌ကူညီ ဆောင်‌ရ်ဝက်‌ပေးရသည်‌။ နိုင်‌ငံတကာအစည်းအဝေးမ်ယားတ်ဝင်‌လည်း ပာဝင်‌ခဲ့်ရပီး အင်‌ဒိုနီးရ်ဟားနိုင်‌ငံ ဘန်‌ဒောင်းရမို.တ်ဝင်‌ ၁၉၅၅ ခုန်ဟစ်‌က က်ယင်းပခဲ့သော ပထမအက်ရိမ်‌ ဘက်‌မလိုက်‌လ်ဟုပ်‌ရ်ဟားမ်ဟုက်ရီးအား မ်ေဝးထုတ်‌ပေးခဲ့သည့်‌ အာရ်ဟအာဖရိက ထိပ်‌သီးညီလာခံတ်ဝင်‌ အတ်ဝင်းရေးမ်ဟူးအဖ်ရစ်‌ ဆောင်‌ရ်ဝက်‌ခဲ့သည်‌။
၄င်းကာလတစ်‌လ်ေယ်ဟာက်‌လုံး သူသည်‌ ဦးနု၏ အယုံက်ရည်‌ရဆုံးန်ဟင့်‌ အနီးကပ်‌ဆုံး လူယုံဖ်ရစ်‌ခဲ့သည်‌။ ၁၉၅၇ မ်ဟ ၁၉၆၁ ခုန်ဟစ်‌ထိ သူသည်‌ မ်ရန်‌မာနိုင်‌ငံ၏ ကုလသမဂ်ဂအမ်ရဲတမ်း ကိုယ်‌စားလ်ဟယ်‌အဖ်ရစ်‌ ကုလသမဂ်ဂတ်ဝင်‌ တာဝန်‌ထမ်း ဆောင်‌ခဲ့်ရပီး အယ်‌လ်‌ဂ်ယီးရီးယား လ်ဝတ်‌လပ်‌ရေး ဆ်ေဝး န်ေဝးပ်ဲဝမ်ယားတ်ဝင်‌ တက်‌က်ရ်ဝစ်ဝာ ပာဝင်‌ခဲ့သည်‌။ ၁၉၆ဝ ပ်ရည့်‌န်ဟစ်‌တ်ဝင်‌ မ်ရန်‌မာအစိုးရမ်ဟ သူ.အား မဟာသရစေည်‌သူဘ်ဲဝ.ကို ပ်ရည်‌ထောင်‌စုစည်‌သူသင်င်္ဂဟအဖ်ဲဝ.၏ ဂုဏ်‌ထူး ဆောင်‌ ပုဂ်ဂိုလ်‌အဖ်ရစ်‌ အပ်‌န်ဟင်းရခင်းခံခဲ့ရသည်‌။
ကုလသမဂ်ဂ အထ်ေဝထ်ေဝအတ်ဝင်းရေးမ်ဟူးခ်ယုပ်‌[ပွငျဆငျရနျ]
က်ဝယ်‌လ်ဝန်‌သူ ဒက်‌ဟမ်‌မားရ်ဟိုး၏ က်ယန်‌ရ်ဟိနသေေး သော ရာထူးသက်‌တမ်းကို ဆက်‌လက်‌ထမ်း ဆောင်‌ရန်‌ ကုလသမဂ်ဂလုံခ်ရုံရေး ကောင်‌စီ၏ ထောက်‌ခံမ်ဟုဖ်ရင့်‌ ဦးသန့်‌အား အထ်ေဝထ်ေဝညီလာခံက်ရီးက တညီတည်ဝတ်‌တည်း ဆုံ်းရဖတ်‌ ရ်ေဝးခ်ယယ်‌ခဲ့သည်‌။ ဦးသန့်‌သည်‌ ယာယီအထ်ေဝထ်ေဝ အတ်ဝင်းရေးမ်ဟူးခ်ယုပ်‌အဖ်ရစ်‌ ၁၉၆၁ ခုန်ဟစ်‌ နိုဝင်‌ဘာ ၃ ရက်‌မ်ဟ စတင်‌တာဝန်‌ထမ်း ဆောင်‌ခဲ့သည်‌။ ထို့နောက်‌ ဦးသန့်‌အားအထ်ေဝထ်ေဝအတ်ဝင်းရေးမ်ဟူးခ်ယုပ်‌အဖ်ရစ်‌ ၁၉၆၂ ခုန်ဟစ်‌ နိုဝင်‌ဘာ ၃ဝ ရက်‌မ်ဟ ၁၉၆၆ ခုန်ဟစ်‌ နိုဝင်‌ဘာ ၃ ရက်‌သက်‌တမ်းအတ်ဝက်‌ တာဝန်‌ထမ်း ဆောင်‌ရန်‌ အထ်ေဝထ်ေဝညီလာခံက်ရီးက တညီတည်ဝတ်‌တည်း ဆုံ်းရဖတ်‌ခဲ့သည်‌။ ၄င်းပထမသက်‌တမ်း ကာလအတ်ဝင်း က်ယူးဘားဒုံးပ်ယံအရေးအခင်းန်ဟင့်‌ က်ဝန်‌ဂိုပ်ရည်‌တ်ဝင်း စစ်‌ပ်ဲဝအဆုံးသတ်‌သည့်‌ ကိစ်စမ်ယားတ်ဝင်‌ က်ယယ်‌ပ်ရန့်‌စ်ဝာ နာမည်‌ရခဲ့သည်‌။ ဦးသန့်‌သည်‌ ၁၉၆၆ ခုန်ဟစ်‌ ဒီဇင်‌ဘာလ ၂ ရက်‌တ်ဝင်‌ ဒုတိယသက်‌တမ်းသို့ ဆက်‌လက်‌ လုပ်‌ကိုင်‌ရန်‌ လုံခ်ရုံရေး ကောင်‌စီ၏ တစ်‌ခဲနက်‌ထောက်‌ခံခ်ယက်‌အရ အထ်ေဝထ်ေဝညီလာခံက်ရီးမ်ဟ ခန့်‌အပ်‌ခ်ရင်းကို ခံခဲ့ရလသေည်‌။ သူ၏ သက်‌တမ်းသည်‌ သူအနားယူသ်ဝားသည့်‌ ၁၉၇၁ ခုန်ဟစ်‌ ဒီဇင်‌ဘာ ၃၁ ရက်‌ထိ က်ရာခဲ့သည်‌။ သူ တာဝန်‌ထမ်း ဆောင်‌ စဉ်‌ကာလအတ်ဝင်း အာရ်ဟန်ဟင့်‌ အာဖရိကမ်ဟ တိုင်းရပည်‌ပောင်းမ်ယားစ်ဝာ၏ အဖ်ဲဝ.ဝင်‌သစ်‌အဖ်ရစ်‌ ဝင်‌ရောက်‌ရေးကို ကမကထ ပ်ရုလုပ်‌ခဲ့်ရပီး တောင်‌အာဖရိက၏ အပာသိုက်‌ လူဖ်ရူလူမည်း ခ်ဲဝခ်ရားရေးဝာဒကို ပ်ရတ်‌သားစ်ဝာ ဆန့်‌က်ယင်‌ခဲ့သည်‌။ သူ၏ သက်‌တမ်းတစ်‌လ်ေယ်ဟာက်‌ ကုလသမဂ်ဂ ဖ်ံဝ.ဖ်ရိုးမ်ဟု ရန်‌ပုံင်ေဝအဖ်ဲဝ.၊ ကုလသမဂ်ဂတက်ကသိုလ်‌၊ အန့်‌တက်‌၊ ယူနီတာန်ဟင့်‌ ကုလသမဂ်ဂ ပတ်‌ဝန်းက်ယင်‌အစီအစဉ်‌အပာအဝင်‌ ကုလသမဂ်ဂလက်‌အောက်‌ခံ အဖ်ဲဝ.အစည်းမ်ယားစ်ဝာကို ထူထောင်‌နိုင်‌ခဲ့သည်‌။
သူ၏ ဦးဆောင်‌မ်ဟုအောက်‌တ်ဝင်‌ ကုလသမဂ်ဂ ၏ စစေ့ပ်‌ဖ်ယန်‌ဖ်ေရခဲ့သော ပဋိပက်ခပောင်းမ်ယားစ်ဝာအနက်‌ ယခုအခာ လူမ်ယား မေ့ပ်ေယာက်‌ကုန်‌က်ရ်ရပီဖ်ရစ်‌သော ၁၉၆၁ ခုန်ဟစ်‌ ယီမင်‌န်ဟင့်‌ ၁၉၆၈ ခုန်ဟစ်‌ ဘာရိန်းတို့မ်ဟ ပ်ရသ်သနာမ်ယား ပာဝင်‌ခဲ့သည်‌။ ပ်ရသ်သနာရပ်‌တိုင်းသည်‌ ဒသေတစ်‌ခုလုံးအား စစ်‌မီးကူးစက်‌ပ်ယံ.ပ်ဝားနိုင်‌သော အခ်ေရအနဖ်ေရစ်‌ခဲ့သော်‌လည်း ဦးသန့်‌၏ အေး ဆေးတည်ရငိမ်‌စ်ဝာပ်ရသ်သနာကိုင်‌တ်ဝယ်‌နိုင်‌မ်ဟုက်ေရာင့်‌ စစ်‌ဖ်ရစ်‌ခ်ရင်းမ်ဟ ကာက်ဝယ်‌တားဆီးနိုင်‌ခဲ့သည်‌။ သူ၏ရ်ေဟ.တ်ဝင်‌ တာဝန်‌ထမ်း ဆောင်‌ခဲ့သူ န်ဟစ်‌ဦးန်ဟင့်‌ မတူသည့်‌အခ်ယက်‌တစ်‌ခုမ်ဟာ ဤရာထူးကို ၁ဝ န်ဟစ်‌က်ရာ ကိုင်‌တ်ဝယ်‌ခဲ့်ရပီး နောက်‌ ရ်ဟိသမ်ယ်ဟသောအင်‌အား က်ရီး နိုင်‌ငံမ်ယားန်ဟင့်‌ မေးထူး ခော်‌ပ်ေရာမပ်ယက်‌ခဲ့ခ်ရင်းပင်‌ ဖ်ရစ်‌သည်‌။ ဦးသန့်‌ အလုပ်‌တာဝန်‌ စတင်‌ခန့်‌အပ်‌သည့်‌ ၁၉၆၁ ခုန်ဟစ်‌တ်ဝင်‌ ဆိုဗီယက်‌ ပ်ရည်‌ထောင်‌စုက စစ်‌အေးအုပ်‌စုတစ်‌ခုစီကို ကိုယ်‌စား ပ်ရု့သည့်‌ အထ်ေဝထ်ေဝအတ်ဝင်းရေးမ်ယူးခ်ယုပ်‌သုံးဦးက်ယင့်‌သုံးသည့်‌ နည်းလမ်းကိုအဆိုပ်ရုရန်‌က်ရိုးပမ်း ခဲ့လသေည်‌။ ဤသို့ဖ်ရင့်‌ အင်‌အား က်ရီးနိုင်‌ငံမ်ယားအတ်ဝင်း ညီမ်ယ်ဟမ်ဟုရ်ဟိစရေန်‌ ရည်‌ရ်ဝယ်‌ခ်ရင်းရဖစ်‌သည်‌။ ဦးသန့်‌အား ဒုတိယသက်‌တမ်း ဆက်‌လက်‌ခန့်‌အပ်‌ခဲ့သည့်‌ ၁၉၆၆ ခုန်ဟစ်‌တ်ဝင်‌မူ အင်‌အား က်ရီးနိုင်‌ငံအားလုံးက လုံခ်ရုံရေး ကောင်‌စီ၏ တစ်‌ခဲနက်‌သဘောတူညီမ်ဟုဖ်ရင့်‌ ဆုံ်းရဖတ်‌က်ရသည်‌။ အထ်ေဝထ်ေဝအတ်ဝင်းရေးမ်ဟူးခ်ယုပ်‌ ရာထူး၏ အရေးပာမ်ဟုန်ဟင့်‌ ဦးသန့်‌၏ လုပ်‌ဆောင်‌ခ်ယက်‌မ်ယားက သက်‌သပ်ေရလိုက်‌ခ်ရင်း ဖ်ရစ်‌သည်‌။
အာရပ်‌ကမ်ဘာန်ဟင့်‌ အစ်စရေးတို့၏ ခ်ေရာက်‌ရက်‌စစ်‌ပ်ဲဝ၊ ခ်ယက်‌ကိုစလိုဗားကီးယားနိုင်‌ငံအား ဆိုဗီယက်‌တို့ သိမ်းပိုက်‌သည့်‌ ပရက်‌န်ေဝဦးအဖ်ရစ်‌အပ်ယက်‌၊ ဘင်္ဂလားဒက်‌ရ်ဟ်‌ နိုင်‌ငံအား မ်ေဝးထုတ်‌ပေးလိုက်‌သည့်‌ ၁၉၇၁ ခုန်ဟစ်‌ အိန်ဒိယ၊ ပာကစ်စတန်‌စစ်‌ပ်ဲဝစသည့်‌ အားလုံးသည်‌ ဦးသန့်‌တာဝန်‌ယူစဉ်‌ကာလအတ်ဝင်း ဖ်ရစ်‌ပ်ယက်‌ခဲ့သည်‌။ အီဂ်ယစ်‌သမ်မတ နာဆာ၏ တောင်းဆိုခ်ယက်‌အရ ၁၉၆၇ ခုန်ဟစ်‌တ်ဝင်‌ ကုလသမဂ်ဂ တပ်‌ဖ်ဲဝ.မ်ယားကို ဆိုင်းနိုင်းသဲကန်တာရမ်ဟ ရုပ်‌သိမ်း ပေးခဲ့သည်‌။ အမရေိကန်‌န်ဟင့်‌ အစ်စရေးနိုင်‌ငံတို့တ်ဝင်‌ ဦးသန့်‌အား ထိုကိစ်စက်ေရာင့်‌ အက်ရီးအက်ယယ်‌ ပ်ရစ်‌တင်‌ဝဖေန်‌ခဲ့က်ရသည်‌။ အမ်ဟန်‌မ်ဟာ ယင်းအခ်ယိန်‌တ်ဝင်‌ ကုလသမဂ်ဂ တပ်‌ဖ်ဲဝ.မ်ယားသုိ့ တပ်‌မ်ယား စေလ်ဝ်ဟတ်‌ခဲ့သော အိန်ဒိယ န်ဟင့်‌ ယူဂိုဆလားဗီးယားနိုင်‌ငံတို့သည်‌ ထိုစဉ်‌အခာက ၄င်းတို့၏ တပ်‌မ်ယားအား ရုပ်‌သိမ်း ပေးရန်‌ သဘောတူခဲ့်ရပီး ဖ်ရစ်‌သည်‌။ ဦးသန့်‌သည်‌ နာဆာအား အစ်စရေးန်ဟင့်‌ စစ်‌မဖ်ရစ်‌ရန်‌ ကိုင်‌ရိုရမို.သို့ နောက်‌ဆုံးအခ်ယိန်‌ထိ သ်ဝား ရောက်‌က်ရိုးပမ်းအားထုတ်‌သ်ဝားခဲ့သည်‌။ တစ်‌ခ်ယိန်‌က အမရေိကန်‌န်ဟင့်‌ ကောင်းမ်ဝန်‌ခဲ့သည့်‌ ဆက်‌ဆံရေးမ်ဟာလည်း ဗီယက်‌နမ်‌စစ်‌န်ဟင့်‌ပတ်‌သက်‌၍ ဦးသန့်‌က အမရေိကန်‌တို့ကို ဝဖေန်‌ခဲ့သဖ်ရင့်‌ ပ်ယက်‌ပ်ရားယိုယ်ဝင်းခဲ့သည်‌။ ဂယ်ွန်‌ဆင်‌၏ အစိုးရက ဝာရ်ဟင်‌တန်‌န်ဟင့်‌ ဟန်ိဝုင်‌အက်ရား တိုက်‌ရိုက်‌စစေ့ပ်‌ရန်‌ ဦးသန့်‌၏ လ်ယ်ဟို.ဝ်ဟက်‌စ်ဝာ က်ရိုးပမ်းမ်ဟုမ်ယားကို ပယ်‌ခ်ယခဲ့ သည်‌။
ဦးသန့်‌သည်‌ ပန်းကန်‌ပ်ရားပ်ယံန်ဟင့်‌ ပတ်‌သက်‌သော သတင်းမ်ယားကို စိတ်‌ဝင်‌တစား လလေ့ာခဲ့လသေည်‌။ ၁၉၆၇ ခုန်ဟစ်‌တ်ဝင်‌ အမရေိကန်‌လူမ်ယိုး ကမ်ဘာ့လထေု ဆိုင်‌ရာ ရူပဗဒေပညာရ်ဟင်‌ ဒောက်‌တာ ဂ်ယိန်း အီး မက်‌ဒော်‌နယ်‌အား ကုလသမဂ်ဂကမ်ဘာ့ပ်ရင်‌ပလထေုဆိုင်‌ရာအဖ်ဲဝ့က်ရီး၏ရ်ေဟ.တ်ဝင်‌ ပန်းကန်‌ပ်ရားပ်ယံန်ဟင့်‌ ပတ်‌သက်‌၍ပ်ေရာက်ရားရန်‌ စီစဉ်‌ပေးခဲ့သည်‌။
၁၉၇၁ ခုန်ဟစ်‌ ဇန်‌နဝာရီ ၂၃ ရက်‌တ်ဝင်‌ ဦးသန့်‌သည်‌ ၄င်းအနဖ်ေရင့်‌ အထ်ေဝထ်ေဝအတ်ဝင်းရေးမ်ဟူးခ်ယုပ်‌ ရာထူးအား တတိယအက်ရိမ်‌လုပ်‌ကိုင်‌ရန်‌ လုံးဝ မဖ်ရစ်‌နိုင်‌တော့က်ေရာင်း ပ်ရတ်‌သားစ်ဝာ င်ရင်းပယ်‌ခဲ့လသေည်‌။ ကုလသမဂ်ဂ လုံခ်ရုံရေး ကောင်‌စီသည်‌ ရက်‌ပောင်းမ်ယားစ်ဝာ အဖ်ေရရ်ဟာမတ်ေဝ.ဘဲ ရ်ဟိရာမ်ဟ ၁၉၇၁ ခု ဒီဇင်‌ဘာ ၂၁ ရက်‌ ဝာလ်‌ဟိန်း၏ ၅၃ က်ရိမ်‌မ်ေရာက်‌မ်ေဝးနေ့န်ဟင့်‌ ဦးသန့်‌၏ ဒုတိယသက်‌တမ်း ကုန်‌ဆုံးရန်‌ ၁ဝ ရက်‌အလိုတ်ဝင်‌ က်ဝတ်‌ဝာလ်‌ဟိန်းအား သဘောတူရ်ေဝးခ်ယယ်‌နိုင်‌ခဲ့က်ရသည်‌။
အထ်ေဝထ်ေဝညီလာခံ၌ သူ၏ နောက်‌ဆုံး န်ဟုတ်‌ဆက်‌မိန့်‌ခ်ဝန်း ပ်ေရာက်ရားရာ၌ သူသည်‌ တာဝန်‌ဝတ်တရားမ်ယား အောင်‌မ်ရင်‌စ်ဝာ ထမ်းဆောင်‌ခဲ့်ရပီးအနားယူရာတ်ဝင်‌ သူသည်‌သာမန်‌ပော့ပာ်းရခင်းမဟုတ်‌ဘဲ လ်ဝတ်‌မ်ေရာက်‌ရေးရ သကဲ့သုိ့ ခံစားရ က်ေရာင်း မိန့်‌က်ရားခဲ့လသေည်‌။ ၁၉၇၁ ခုန်ဟစ်‌ ဒီဇင်‌ဘာ ၂၇ ရက်‌ထုတ်‌ နယူးယောက်‌ တိုင်းမ်‌ သတင်းစာက်ရီး၏ ခောင်း က်ရီးပိုင်းတ်ဝင်‌ 'သူ အနားယူသ်ဝာ်းရပီး နောက်‌တ်ဝင်‌လည်းရငိမ်းခ်ယမ်းရေးအတ်ဝက်‌ အားတက်‌သရော လုပ်‌ဆောင်‌ခဲ့သည့်‌ ဦးသန့်‌၏ လေးနက်‌သော ပညာဉာဏ်‌က်ရီးမားမ်ဟုကို ဆက်‌လက်‌အားကိုး နေရဦးမည်‌' ဟု မ်ဟတ်‌ခ်ယက်‌ပေးခဲ့သည်‌။ ခောင်းစဉ်‌ကိုမူ 'ဦးသန့်‌၏ လ်ဝတ်‌မ်ေရာက်‌ခ်ရင်း' ဟု တပ်‌ခဲ့သည်‌။
ထူးခ်ရား ပ်ေရာင်‌မ်ေရာက်‌သည့်‌ နောက်‌ဆုံးပ်ဲဝ[ပွငျဆငျရနျ]
ဦးသန့်‌သည်‌ ၁၉၇၄ ခုန်ဟစ်‌ နိုဝင်‌ဘာ ၂၅ ရက်‌တ်ဝင်‌ နယူးယောက်ရမို.၌ အဆုပ်‌ကင်‌ဆာဖ်ရင့်‌ က်ဝယ်‌လ်ဝန်‌ခဲ့သည်‌။ ထိုအခ်ယိန်‌တ်ဝင်‌ မ်ရန်‌မာနိုင်‌ငံသည်‌ ဦးသန့်‌၏ ဂုဏ်‌သတင်းမ်ယားကို အသိအမ်ဟတ်‌မပ်ရုသည့်‌ စစ်‌အစိုးရက အုပ်‌ခ်ယုပ်‌လ်ယက်‌ရ်ဟိသည်‌။ ထိုစဉ်‌က မ်ရန်‌မာနိုင်‌ငံသမ်မတ ဦး နေဝင်းသည်‌ ဦးသန့်‌အား နိုင်‌ငံတကာမ်ဟ အသိအမ်ဟတ်‌ပ်ရုမ်ဟုန်ဟင့်‌ မ်ရန်‌မာလူထုက်ရီးက က်ရည်‌ညိုလေးစားမ်ဟုပ်ရုသည်‌ကို မနာလိုလ်ယက်‌ ရ်ဟိသည်‌။ ဦး နေဝင်းက ၄င်း၁၉၆၂ ခုန်ဟစ်‌ မတ်‌ ၂ရက်‌တ်ဝင်‌ အာဏာသိမ်း၍ ဖ်ရုတ်‌ခ်ယခဲ့သော ဦးနု၏ ဒီမိုကရစေီအစိုးရန်ဟင့်‌ ဦးသန့်‌တို့ နီးကပ်‌စ်ဝာ ဆက်‌န်ဝယ်ဟုကိုလည်း မန်ဟစ်‌မ်ရို့ပေ။ ဦး နေဝင်းသည်‌ ဦးသန့်‌၏ ရုပ်‌ကလပ်‌အား နိုင်‌ငံတော်‌ဈာပနအဖ်ရစ်‌ မပ်ရုလုပ်‌ဘဲသဂ်ရိုဟ်‌‌ရန်‌ အမိန့်‌ပေးခဲ့သည်‌။ ကုလသမဂ်ဂ ရုံးခ်ယုပ်‌ရ်ဟိရာ နယူးယောက်ရမို.မ်ဟ ဦးသန့်‌၏ ရုပ်‌ကလပ်‌အား ရန်‌ကုန်ရမို.သို့ ပ်ရန်‌လည်‌ သယ်‌ဆောင်‌ခဲ့ရာ ရန်‌ကုန်‌အရောက်‌တ်ဝင်‌ ခရီးဦး က်ရိုဆိုမည့်‌ ဂုဏ်‌ပ်ရုတပ်‌ဖ်ဲဝ. သော်‌လည်း ကောင်း၊ အစိုးရအရာရ်ဟိမ်ယား သော်‌လည်း ကောင်း မတ်ေဝ.ရ ခ်ေယ။
၁၉၇၄ ခုန်ဟစ်‌ ဒီဇင်‌ဘာ ၅ ရက်‌ ဦးသန့်‌၏ ဈာပနအခမ်းအနား က်ယင်းပမည့်‌နတေ့်ဝင်‌ မ်ေရ်ရမှုပ်‌သ်ရင်္ဂိုဟ်‌ခ်ရင်း မပ်ရုမီ က်ယိုက်ကဆံ မ်ရင်းရပိုင်‌က်ဝင်းတ်ဝင်‌ ဦးသန့်‌၏ ရုပ်‌ကလပ်‌အား မ်ရန်‌မာပ်ရည်‌သူမ်ယားက နောက်‌ဆုံးအက်ရိမ်‌ ဂာရဝပ်ရုနိုင်‌ရန်‌ ပ်ရသထား လေသည်‌။ ထောင်‌ပောင်းမ်ယားစ်ဝာသော ပ်ရည်‌သူလူထုမ်ဟာ လမ်း ဘေးဝဲယာတို့မ်ဟ တန်းစီ၍ ဂာရဝပ်ရုရန်‌ စောင့်‌ဆိုင်းလ်ယက်‌ရ်ဟိက်ရသည်‌။
ဦးသန့်‌၏ ရုပ်‌ကလပ်‌ကို ရန်‌ကုန်‌သုသာန်‌တ်ဝင်‌ မ်ေရ်ရမှုပ်‌သဂ်ရိုဟ်‌ခ်ရင်းရပုရန်‌ ခရီးမစတင်‌မီတ်ဝင်‌ ဆန်ဒပ်ရ က်ေယာင်းသား တစ်‌စုက လုယူသ်ဝာ်းရပီး ရန်‌ကုန်‌တက်ကသိုလ်‌ ပရဝုဏ်‌အတ်ဝင်း က်ေယာင်းသားသမဂ်ဂ နရော ဟောင်းတ်ဝင်‌ ဂူသ်ဝင်းသဂ်င်္ရိုဟ်‌က်ရသည်‌။ က်ေယာင်းသားသမဂ်ဂအဆောက်‌အအုံမ်ဟာ ၁၉၆၂ ခုန်ဟစ်‌ ဇူလိုင်‌ ၈ ရက်‌က ဦး နေဝင်းက မိုင်းခ်ဲဝ၍ ဖ်ယက်‌ဆီး စေခဲ့်ရပီ်းရဖစ်‌သည်‌။
ဆန်ဒပ်ရ က်ေယာင်းသားမ်ယားသည်‌ ၁၉၇၄ ဒီဇင်‌ဘာ ၅ ရက်‌မ်ဟ ၁၁ ရက်‌အတ်ဝင်း တက်ကသိုလ်‌ပရဝုဏ်‌အတ်ဝင်းတ်ဝင်‌ ယာယီဗိမာန်‌တစ်‌ခု တည်‌ဆောက်‌က်ရ်ရပီး အစိုးရဆန့်‌က်ယင်‌ရေးမိန့်‌ခ်ဝန်းမ်ယား ပ်ေရာက်ရား က်ရသည်‌။ ၁၉၇၄ ခုန်ဟစ်‌ ဒီဇင်‌ဘာ ၁၁ ရက်‌ နံနက်‌ မိုး သောက်‌ခ်ယိန်‌မတိုင်‌မီတ်ဝင်‌ စစ်‌တပ်‌မ်ဟ တက်ကသိုလ်‌ က်ေယာင်းဝင်းအား ခ်ယင်းနင်းသိမ်းပိုက်‌က်ရ်ရပီး ဦးသန့်‌၏ ရုပ်‌ကလပ်‌အား ရ်ေဝ်ဟတိဂုံခ်ေရရင်းသို့ ပ်ေရာင်းရ်ေဝ်ဟ.်ရမှုပ်‌န်ဟံခဲ့က်ရသည်‌။ ယခုထက်‌တိုင်‌ ၄င်း နေရာတ်ဝင် ရ်ဟိနဆေဲ ဖ်ရစ်‌သည်‌။ ယာယီဂူဗိမာန်‌အား စောင့်‌ရ်ေဟာက်‌နသေည့်‌ က်ေယာင်းသားအခ်ယို. သဆေုံးခဲ့က်ရသည်‌။
တက်ကသိုလ်‌က်ေယာင်းဝင်းတ်ဝင်‌ ဖ်ရစ်‌ပ်ယက်‌ခဲ့သည်‌မ်ယားန်ဟင့်‌ ဦးသန့်‌၏ ရုပ်‌ကလပ်‌အား အင်‌အားသုံး၍ရ်ေဝ်ဟ. ပ်ေရာင်းသည်‌ကို က်ရားသိရသော်ရမို.လူထုသည်‌ လမ်းမပော်‌သို့ ထ်ဝက်‌၍ ဆန်ဒပ်ရက်ရသည်‌။ ရန်‌ကုန်‌ဝန်းက်ယင်‌တစ်‌ခုလုံးကို စစ်‌အုပ်‌ခ်ယုပ်‌ရေး က်ေရညာခဲ့်ရပီး ဦးသန့်‌အရေးအခင်းဟု လူသိခဲ့သော အရေး တော်‌ပုံမ်ဟာ ဦး နေဝင်းမ်ဟ ခ်ေယမ်ဟုန်းရခင်းကို ခံခဲ့ရသည်‌။
၁၉၇၈ ခုန်ဟစ်‌တ်ဝင်‌ ဦးသန့်‌က်ဝယ်‌လ်ဝန်ရပီး နောက်‌ အမရေိကန်‌စာအုပ်‌တိုက်‌ဖ်ရစ်‌သည့်‌ ဒာဘဲလ်‌ဒေးစာပတေိုက်‌မ်ဟ ကုလသမဂ်ဂ မ်ဟ မ်ေယ်ဟာ်‌က်ရည့်‌ခ်ရင်း ဟူသော စာအုပ်‌ကို ထုတ်‌ဝခေဲ့သည်‌။ နယူးယောက်ရမို. ကုလသမဂ်ဂ ဌာနခ်ယုပ်‌မ်ဟ မလ်ဟမ်းမကမ်းရ်ဟိ ဘဲလ်‌မောင့်‌ကယ်ွန်းကို အထ်ေဝထ်ေဝအတ်ဝင်းရေးမ်ဟူးခ်ယုပ်‌ ဦးသန့်‌အား အမ်ဟတ်‌ရသည့်‌ အနန်ေဟင့်‌ ဦးသန့်‌က်ယ်ဝွန်းဟု တရားမဝင်‌ခော်‌ဝော်‌ခဲ့သည်‌။ ဦးသန့်‌သည်‌ ဇနီ်းရဖစ်‌သူ ဒော်‌သိန်းတင်‌န်ဟင့်‌ ထိန်းရမားခဲ့သည်‌။ သူ.တ်ဝင်‌ သမီးတစ်‌ယောက်‌၊ မ်ေရး လေးယောက်‌၊ မ်ရစ်‌သုံးယောက်‌တို့ က်ယန်‌ရစ်‌ခဲ့သည်‌။ သူ၏မ်ေရးတစ်‌ဦ်းရဖစ်‌သူ သန့်‌မ်ရင့်‌ဦးသည်‌ ကုသမဂ်ဂ ၏ နိုင်‌ငံရေးရာဌာနတ်ဝင်‌ သမိုင်းပာရဂူအဖ်ရစ်‌ တာဝန်‌ထမ်း ဆောင်‌လ်ယက်‌ရ်ဟ်ိရပီး မ်ရစ်‌တစ်‌ခု၏ ပ်ေယာက်‌ဆုံး နသေော ခ်ေရရာမ်ယား ဟူသော ဦးသန့်‌၏ ကိုယ်‌ရေးသမိုင်းတစ်‌စိတ်‌တစ်‌ဒသေကို ရေးသားခဲ့သည်‌။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆှေးနှေးခကျြ:သနျ့၊_ဦး&oldid=52192" မှ ရယူရနျ
ဤစာမကျြနှာကို ၁၇ နိုဝငျဘာ ၂၀၁၀၊ ၁၁:၃၄ အခြိနျတှငျ နောကျဆုံး ပွငျဆငျခဲ့သညျ။